Nnukwu data na-eweta ahia buru ibu | Martech Zone
IBM weputara ihe infographic mepụtara site na ụfọdụ weputara iji data eme ihe.
Oké iju mmiri nke nnukwu data taa na-anọchite anya ohere dị ukwuu maka ndị na-ere ahịa na-eche echiche n'ihu. Mana iji nweta ikike zuru oke dị n'ime nnukwu iyi ndị a ahaziri ahazi na nke edozighi, ndị otu ga-ebuli ngwa ngwa mgbasa ozi, nyochaa nsonaazụ mgbasa ozi, melite nhọrọ saịtị yana weghachite mgbasa ozi.
Ihe omuma gosipụtara mkpa ndị ahịa ahịa dị iji mejuputa iwu ndi mmadu na-achikota nke ihe omuma, meziwanye ihe ndi ozo, c meputa uzo nke teknụzụ data-centric na ndị mmekọ, ma kọwaa ochichi data ịre ahịa iji nweta data ahụ. Nke a ga - enyere ndị na - ere ahịa aka ịmata ndị nwere ike ịnụ ozi ma zube ha n’ụzọ ziri ezi, mee ka ozi ziri ezi dị na oge kwesịrị ekwesị site na ichekwado ọdịnaya dabara adaba, bulie ngwongwo mgbasa ozi site na ịchọpụta ndị nwere ọnụ ahịa dị elu gafere ngwa ahịa ndị bipụtara ma bulie mgbasa ozi mgbasa ozi na ịghọta uru nke ọwa dị elu n'ime olulu ahụ.
Goldkpụrụ ọla edo nke ire ahịa